सालौं साल पछि गाउँ फर्किदा
चौडा बाटो भएछ
मुल बाटो बदलिएर मेन रोड भएछ
गाउँ बदलिएर सहर
सहर मात्र होइन
छन्द न बन्दको नमुना रहर भएछ ।
भारी मन लिई दुई चार गरूंगा पाइला के सारेको थिएँ
पाँच तल्ला माथिबाट काकी चिच्याइन
भेजिटेवललाई पानी दिन लाको ।
सम्झें हामी सानो छँदा त
खेत खलियान बारिका कान्लामा
तरकारी बारी हुन्थ्यो
अहिले त पाँच तल्ला माथि भेज फलेछ
गहरा कान्ला बेचेर बँगला ठडिएछ ।
झिंझा झुझि झोसि भुसेचुलो दनकाउने
सानिमा नि पक्की घरमा बस्ने भईछन
सानोबाको काठको फ्याक्ट्री सार्है फापेछ
सिमा पारी छिमेकीलाई
रेलको लिक बनाउन यहि काठले भाकोछ ।
जुगांमा ताऊ लगाउँदै माइलाबा बोले
पैसा कमाउन तँ त सात समुन्द्र पारी पुगिस
पैसो त त्यहि खोला मुनि पो रहेछ ।
गगन चुम्बी भवन उनको त्यसै ठडियन
बालूवा ढु़ँगा रोडा गिट्टी माटो सबै खनी
माथि माथि मात्र केवल पानी बगि जाने
गहरा खेत सबै प्लटिगं
जंगल नासिएर बस्ती बसेछ
दाँत झिकिएको जस्तो
खाल्टै खाल्टो खोला पनि सार्है् कूरुप देखिएछ ।
खोल्नै नसकि आँखाहरू
म आफ्नो घरको बाटो लागें
जान्ने सुन्ने मेरा बाले
काकीलाई ठुलै गुन लगाएछन्
सुन फल्ने माटो बेची तासको दरबार ठडाएछन
मात्र काठ बेचनु भनि सानोबालाई सिफ़ारिश दिलाएछन्
खोला नाला देशको सम्पती हो
तर मुनि दाया बायाँ जे छ सबै तिम्रो भनि
सबैको सेवा गरी मेवाबाट दरबार ठडाएछन् ।
सोचिकन यि सबै
फिटिकै निद्रा आएन नयनमा
उजाड जंगल जस्तै ऊजाड थियो मन
अचानक गर्जियो मेघ फूटन थाल्यो बाँध
जलमग्न चारैतिर थिएन एक पनि साँध
गर्र्यौ दुइदिनको रमझम बेचि खोलानाला
सक्छौ भने थेग पहिरो थाप आफ्नै कॉध ।
Last Updated on Thursday, 20 June 2019 11:09
Last Updated on Wednesday, 20 March 2019 16:22
Last Updated on Thursday, 17 January 2019 14:33
Last Updated on Tuesday, 12 February 2019 16:05
साहित्य को पहाड बोकेर हिंडेका पहारी
- बिजय हितान
'मान्छे हराएको देश' मलाई सुम्पेर आज कृष्ण पहारी म देखी हराउनु भएको छ । उक्त पुस्तकभित्र वाँहाका हस्तलिखित अक्षरहरु- 'मित्र बिजय हितान ज्युमा सप्रेम समिक्षार्त उपहार, २०७४/२/२९' मैले दोहराइ-दोहराइ हेरेको छु त्यस भित्रका कबिताहरु पढ्नेक्रममा । आफ्नो बेलायतको छोटो भ्रमणका बेला बेल्पाली साहित्यकार माझ सद्भावनाका न्याना शब्दहरु बाँडेर आज वाँहा हामीबाट हराउनु भएको छ । साहित्यमा लाग्न अरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै सहित्त्यिक ज्ञानको पहाड बोकेर हिंडेका पहारी जि आज पोखराथोक, पाल्पाबाट हराउनु भएको छ । समग्रमा नेपाली साहित्यको किताबबाट एक पाना हराएको छ । तर पहारी जि को कबिता सङ्रह 'मान्छे हराएको देश' र वाँहाका अन्य कृतिहरु नेपाली साहित्यिक छितिजबाट कहिल्लै हराउने छैनन भन्ने मलाई लागेको छ ।
बेलायत भ्रमण पस्चात नेपाल फर्केको छोटो अवधिमै वाँहाको निधन भएको दु:खद समाचारले बेल्पाली साहित्यको आकाश धमिलो भयो । मेरा आँखाबाट आँसुका बर्षा भए उनिसँग बिताएका दिनहरु सम्झदै । पहारी जि याँहा हुँदा बेलाबेलामा मलाई फोन गर्नुन्थ्यो, मैले वांहालाइ फोन गर्थें र लामो समय हामीहरु साहित्यिक गफमा भुल्थ्यौं । र अन्य केही साहित्यिक कार्यक्रममा पनि भेट हाम्रो भैरह्यो ।
यो भन्दा अगाडि कहिल्लै भेट नभएका हामी ४ जुन २०१७ का दिन लन्डनमा भेट भयौं । यो कुनै ब्याबसायिक भेट थिएन, यो कुनै राजनैतिक भेट थिएन, यो कुनै सौदाबाजीको भेट थिएन, यो कुनै गाउँले भेट पनि थिएन । थियो त, त्यो हाम्रो स्वाच्छ साहित्यिक भेट थियो ।
हामी बेल्पाली साहित्यकार गत केही बर्ष देखी लन्डनमा बातावरण साहित्य सम्मेलन गर्दै आएका छौं । पृथ्वीको प्राकृतिक बातावरण प्रदुशित हुँदै गएकोले यसलाई जोगाउन पर्छ भने सन्देश दिलाउन मलाई बातावरण साहित्य गर्न मन पर्छ । त्यसैले बेलायतमा सबै साहित्यिक संस्थाहरुलाई आबद्द गर्दै मैले विश्व बातावरण दिवसलाई पारेर यो कार्यक्रम सम्योजन गरेको थिएँ । साहित्य सँगमका सम्योजक बिनोद अधिकारीले पहारीलाई त्यो कार्यक्रममा ल्याएर आउनु भयो । हामीले पहारि जि लाई बिशेष अतिथिको रुपमा सम्मान गर्‍यौं । वाँहाका चोटिला मुक्तक पनि सुन्यौं । कार्यक्रमको अन्त्यमा हाम्रा कृतिहरु साटासाट गरेउँ । मैले मेरा ' बाग्मती ब्लुज' र 'इको उत्सर्जन' दुई कृति उपहार चढाएँ । वाहाँले 'मैले धेरै ल्याएको छैन, दुई चार प्रती मात्रै छन, हजुरलाई मात्र बिशेष मित्रको रुपमा है' भन्दै 'मान्छे हराएको देश' झोलाबाट झिकेर मलाई दिनुभयो । हामीले बातावरण कबिताहरुको सँगालो प्रकाशन गर्ने योजना मा थियौं । 'तपाईंको बेलायत बसाइभित्र एक बातावरण कबिता मलाई दिनुहोला है सङ्कलनमा राख्न' भनेर मैले निबेदन गरेको थिएँ । नेपाल जानु भन्दा अगावै नै 'बगरले पुरिएको फाँट जस्तै जिन्दगी' मलाई दिनुभयो ।
त्यसको एक अंस यस्तो छ-
किनारामा थुपारिएको बगर जस्तैहो
खडेरीले झारेको पात जस्तै लागिरहेछ…….
उनका यि शब्दहरुमा केही मात्रामा बातावरणिय भावना पोखिएका भए पनि बढी आफ्नै जिन्दगीदेखी बिरक्तिएको सङ्केत पाईन्छ । सम्भवत यो कबिता वाँहाको जीवनको अन्तिम श्रीजना हुनसक्छ । त्यसो हो भने, यस श्रीजनाले अब प्रकाशन हुँदै गरेको इको कबिताहरुको सँगालो 'स्वाच्छन्द सुसेलिहरु' मा महत्वपूर्ण स्थान रहनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
हाम्रो भेटको क्रममा 'बाटिका लघु कथामा हामी लाघु कथाहरु प्रकाशन गर्दै छौं, एउटा हजुरको पनि दिनुहोला है, म नजांदै' भन्नुन्थ्यो । अनी त मैले 'गहिरो पहिरो' लघुकथा दिएर पठाएको थिएँ ।
यसरी हामी साहित्यकारहरु अरु उपहार एक आपसलाई के नै दिन सक्छौं र । न त धन दिन सक्छौ, नत सुन चाँदि नै । न त होटेलमा बोलाएर टन्न भोज खुलाउन सक्छौं; न त खेत जोतेर, बारी खनिदिएर, छाना छाइदिएर, भारी बोकिदिएर श्रमदान दिनसक्छौं । सक्छौं त मात्रै एक आपसमा श्रीजना र कृति साटा-साट गरेर समिप हुन । यिनै साहित्यिक साटा-साटिले मलाई र पहारि जी लाई छोटो समयमा नजिक बनाएको हो । हाम्रो मित्रताको जाले रुमाल यसरी बुनिएको हो । ५५ वोटा श्रीजना बोकेको 'मान्छे हराएको देश' भित्र सामाजिक, राजनितिक, सान्स्कृतिक, आर्थिक बिसंगतिका ज्वारभाटाहरु उर्लेका छन । कुनैमा आफ्नै जिन्दगीका उकाली ओरालीका कथा ब्यथाहरु बनेर खोला जस्तै उर्लेका छन ।
नदी र मन सिर्शक कबितामा पहारी जि को भावना यसरी बगेको छ-
जाजरकोट बगाएको छु…….
म जवर्जस्ती आस बगाएर बगेको छु ………
यसरी हामी दुई बिच मित्रताको पुल बन्न सफल उनको यस पुस्तक मेरो किताबहरुको दराजमा महत्वपूर्ण स्थान ओगड्ने छ । तर यो हाम्रो मित्रता दुर्भाग्यबस त्यती लामो टिक्न सकेन । ४ जुन २०१७ मा गाँसिएको हाम्रो मित्रताको माला १६ डिसेम्बर २०१७ मै भौतिक रुपमा टुटेर गयो । वाँहा बाँचेको भए अझै हामी कती साहित्यिक भावनाहरु साटासाट गर्थेउँ भबिश्यमा भनेर आज मलाई पछुतो लागिरहेको छ ।
यसरी स्थानिय क्षेत्रमा धेरै साहित्यिक संस्थाहरुमा आबद्द अनी एक-एक गजल, मुक्तक र कबिता संग्रह प्रकाशित गरिसक्नुभएका बहु-आयामिक साहित्यकार मित्रलाई दैबले हरेर लगेको छ । यस्तो दु:खत घडीमा म ब्यक्तिगत र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट स्रदान्जलिका फुलहरु अर्पण गर्न चाहन्छु । अरुलाई साहित्यमा प्रेरणा दिंदादिंदै समय नभएर होला पहारी जि का कथा, उपन्न्यास र अन्य बिधाका ९ कृतिहरु अप्रकासित रहेछन । ति अधुरा सपनालाई वाँहाका परिवारले पुरा गरिदेने छन भन्ने मैले आशा लिएको छु ।
(पहारीजिको प्रथम वार्षिकी पारेर समबेदनाका केही हरफ)
Last Updated on Thursday, 17 January 2019 14:29
मेरो काठमान्डु अवतरण र प्रदुशित बातावरण
मगर चलचित्रकर्मी पुर्बी नवलपरासीमा चेतन रजाली